Lasopy trondro mora be any Thermomix | ThermoRecipes
lasopy50 minitraOlona 4290 kaloria
Omano ity tavoahangy trondro Tsotra be izy io. Hampiasa hake mangatsiaka (notetehina mialoha) sy hazan-dranomasina mangatsiaka izahay.
Ao amin'ny horonan-tsary dia manana ny dingana tokony harahina ianao ary eto koa, ao amin'ny fizarana fiomanana.
La mifoha dia masaka ao amin'ny varoma, raha manomana ny ambin'ny SOPA. Ary mba haka vatana ny ron-kena, dia hokosohinay ny masaka sasany rehefa masaka izy ireo. Mora izany.
1 Lasopy trondro tena mora
Lasopy tena mora azo hanomanana izay hampiasantsika trondro sy hazan-dranomasina (mangatsiaka mialoha).
Tongolo 55 g
Tongolo gasy 10g
40 g ny fifangaroan'ny voatabia telo
Zavamaniry manitra vaovao: chives, persily ary rosemary)
Akorandriaka mifangaro hafangaro 500g (pre-thawed)
400 g ny fihinana mangatsiaka (efa maty teo aloha)
Turmerika 1 sotrokely
Apetrakay ao anaty vera ny tongolo sy tongolo lay. Izahay dia manao fandaharana 5 segondra, hafainganam-pandeha 5. Ampidinintsika miaraka amin'ilay spatula izay sisa tavela amin'ny rindrin'ny vera.
Ampianay ny menaka oliva, ny voatabia voatabia, ny anana manitra ary ny dipoavatra. Izahay dia manao fandaharana 5 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1, nefa tsy apetrakao ilay vavam-bary.
Manampy ny hazan-dranomasina sy ny programa izahay 3 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganam-pandrefesana.
Arotsanay ao anaty vera ny rano sy ny turmerika.
Izahay dia mizara ny hake ao anaty fitoeram-bokatra varoma. Apetrakay eo amin'ny vera ny sarony ary ny varoma amin'ny toerany, miaraka amin'ny fonony. Izahay dia manao fandaharana 15 minitra ny maripana varoma, fihodina ankavia, hafainganam-pandrefesana.
Esorinay ny varoma. Arotsaho ny akorandriaka amin'ny alàlan'ny fandatsahana ny ron-kena ao anaty vilany. Napetrakay tao anaty vera ny akoranay niaraka tamin'ny vilany saosy roa. Izahay dia manao fandaharana 40 segondra, hafainganam-pandeha 10.
Ampiantsika ao anaty lasopy io fangaro io, miaraka amin'ny sisa amin'ny hazan-dranomasina sy ny hake. Amboarinay ny sira raha ilaina ary aroso.
Ny fangaro amin'ny hazan-dranomasina mangatsiaka rehetra dia azo ampiasaina. Raha tsy manana hoditra na akorandriaka dia hahafinaritra kokoa ho an'ireo hisakafo. Ny turmerika dia azo soloina safrona.
Fanazavana fanampiny - Lasopy, puree ary menaka ao Thermorecetas
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Lasopy trondro tena mora
Maria josefa dia hoy izy:
Tena manan-karena! Hosedraiko izany. Tiako ny resinao.
Valiny tamin'i Maria Josefa
Endrey ny mahafinaritra anao, Maria Josefa. Misaotra tamin'ny hevitrao. Famihinana!
M Carmen dia hoy izy:
Salama hariva Ascen, hitako fa tsara sy mahasalama ity fomba fahandro ity
Saingy azontsika atao ny mampiasa ny fonony antsy mba hanaovana azy ary amin'ny minitra farany dia ataovy ao anaty vera ihany koa ny fihorakorahana, sa tsy izany?
Miarahaba ary manantena aho fa ny valinteninao
Valiny tamin'i M Carmen
Salama, M Carmen, misaotra betsaka 🙂 Mazava ho azy, azonao atao ny mametraka mangingina ny mpiambina antsy na lolo, rehefa foana ny vera. Ary ny hake dia azo ampiana ao anatin'ny minitra farany, noho izany dia ho be ranony kokoa.
Manantena aho fa tianao izany. Famihinana!
Salama, inona ny hazan-dranomasina nampiasanao, aiza no azonao ividianana azy?
Salama Cris. Novidiko betsaka tao Lidl izany fa ho hitanao ao amin'ny fivarotana sakafo mangatsiaka na supermarket anao izany.